Gbasara Anyị | Ningbo SURE PAPER CO., LTD
Ningbo sure Paper Co., Ltd. guzobere na 2011, ọkachasị na -ere ahịa ụlọ na nke mba ọzọ nke akwụkwọ ọkwa nri, akwụkwọ mkpuchi, akwụkwọ iko, kaadị ọdụm, akwụkwọ dara, akwụkwọ mmado akwụkwọ ozi. Ka ọ dị ugbu a, anyị emebela mmekọrịta na-adịte aka yana ihe karịrị ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ 1,000 gburugburu ụwa.
anyị nwere ngwaahịa dị puku tọn 8,000 kwa ọnwa, yana igwe 18 dị mkpa dị ka igwe ịcha, igwe na-adọkpụ na igwe etemeete, igwe na-eme mkpọtụ, igwe na-akwakọba akpaka ect.
Yabụ na ọ pụtara na anyị nwere ike nyefee iwu gị n'ime obere oge iji mezuo ihe ị chọrọ, anyị nwekwara ike ịmere gị akwụkwọ nha niile ahaziri iche. enwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe ole na ole nwere ike ịmere gị ya n'ahịa.
Kedu ihe anyị nwere ike imere gị?
1: Anyị nwere ikike imezu ihe niile ị chọrọ nha na ibu dị iche iche n'oge kwesịrị ekwesị n'akwụkwọ.
2: obere ụbọchị nke nnyefe.
3: Ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ nke ọzọ maka akwụkwọ, dị ka ibi akwụkwọ, mee ya ka ọ bụrụ ngwongwo emechara ..., ee, nweere onwe gị ịgwa m, anyị nwere ụlọ ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi nke anyị na ya rụkọrọ ọrụ, anyị nwere ike inye aka mee ya nke ọma. ọnụahịa
4: Ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ sitere na "APP" ma ọ bụ "Chenming", anyị nwere ike zụta ya na ọnụ ahịa mara mma, n'ihi na ị maara, ụlọ ọrụ akwụkwọ a anaghị eme ndị ahịa ikpeazụ azụmaahịa ozugbo, ha na-eresị anyị akwụkwọ- ụlọ ọrụ (anyị ga -azụta ihe karịrị tọn 1500 kwa ọnwa n'aka ha ka idobe ọnọdụ ụlọ ọrụ).
5: Ihe anyị na -agbalị ime mgbe niile bụ inyere gị aka iji obere ego nweta otu akwụkwọ dị mma ma e jiri ya tụnyere ahịa mpaghara gị.
6: Anyị nwere ọnụ ahịa dị oke ọnụ n'ahịa akwụkwọ, ọtụtụ akwụkwọ na mba ofesi sikwa n'ahịa China, anyị nwere ike nye gị akụkọ kacha ọhụrụ maka akwụkwọ.
Ka anyị bụrụ onye mmekọ gị na -eguzosi ike n'ihe ma nyere gị aka idozi nsogbu niile n'ụzọ.
(1) Ogo kacha mma, ọkọlọtọ mba ụwa, ISO NA FSC akwụkwọ ect;
(2) Ahụmịhe bara ụba na azụmaahịa mba ofesi;
(3) OEM anabatara; oche mpempe akwụkwọ na -agbanwe agbanwe, enwere ike imepụta nha niile;
(4) Ọrụ VIP mba ụwa TOP anyị;
(5) Nkwupụta ọsọ ọsọ na nke ziri ezi;